We.com.mm - သင်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တွေ့မြင်ရတတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းအမျိုးအစား (၁၃) မျိုး
သင့်ဘဝမှာ လူအမျိုးမျိုးနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရဖူးမှာပါ။ သင့်ရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေမှာလည်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ပုံစံမတူ၊ စိတ်ဓာတ်မတူကြတဲ့ လူအမျိုးမျိုးရှိမှာပါပဲ။ အဲဒါကြောင့် ယေဘူအားဖြင့် သင်တို့တွေမှာ ရှိတတ်တဲ့ သူငယ်ချင်း (၁၀) မျိုးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
သင့်သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ အရွှီးကောင်းသူတွေရှိတတ်ပါတယ်။ ဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ် သူ့မှာ ရွှီးဖို့ စကားတွေ ရှိနေပါတယ်။ သင်နဲ့ချိန်းထားလို့ နောက်ကျတဲ့အခါ၊ သူ့ဘက်က ပျက်ကွက်မှုတစ်စုံတစ်ရာ ရှိတဲ့အခါ၊ ဘယ်လို အချိန် မှာပဲဖြစ်ဖြစ် သူ့မှာ အကြောင်းပြချက်တွေ မရိုးနိုင်အောင်ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဟုတ်တာမဟုတ်တာ အသာထား သူကတော့ လတ်တလောပြေလည်ဖို့အတွက် သူ့ထုံးစံအတိုင်း ရွှီးမှာပါပဲ။ သူရွှီးပါများလာတဲ့အခါ မှာတော့ သင်တို့သူငယ်ချင်းတွေဟာ သူပြောသမျှကို မယုံတတ်တော့ပါဘူး။
ဒီလူလိုမျိုးကတော့ ဘယ်သူတွေဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို အမြဲ အချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနေတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်းကိုလည်း လူစုံရင် ပြန်လည်ဖောက်သည်ချတတ်တာ သူတို့အကျင့်ပါပဲ။ အဲဒီအတင်းတုတ်တာ ဟာ မိန်းကလေးတွေချည်းပဲလို့ မထင်ပါနဲ့၊ ယောကျာ်းလေးတွေထဲမှာလည်း အဲဒီအကျင့်ရှိတတ်ပါတယ်။
၃။ အမြဲ feel နေတဲ့သူ
သူတို့တွေက အလွမ်းဓာတ်ခံရှိကြသူတွေပါ။ သူတို့ဘဝမှာ တစ်ကြိမ်တစ်ခါလောက် ကြုံခဲ့ဖူးတဲ့ လွမ်းဆွေးစရာ တစ်ခုကိုပဲ မပြီးနိုင်မစီးနိုင် ကာလရှည်ကြာစွာ feel တတ်ကြသူတွေပါ။ သူတို့တွေ feel တာကို နေသားကျသွား ပြီဆိုရင်တော့ သူငယ်ချင်းတွေကြားမှာ သူတို့ feel တာကိုက ပျော်စရာလို ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။
ဘယ်လိုပွဲတော်တွေမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အမြဲကဲနေကြသူတွေပါ။ သင်္ကြန်ဆိုလည်းပါမယ်၊ သတင်းကျွတ်လည်းပါမယ်၊ ခရစ္စမတ်တို့ ဟောလိုးဝင်းတို့လည်း သူတို့ပါပြန်တာပါပဲ။ New Year မှာ အပီကဲဖို့လည်း မလွတ်စေရပါဘူး။ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲဆိုရင် အကုန်လာထားဆိုတဲ့ သူတွေ၊ ဘဝကို ပျော်ပျော်ကြီး ဖြတ်သန်းနေကြသူတွေပါ။
၅။ နွေးထွေးပြီး မိခင်နဲ့တူတဲ့ သူငယ်ချင်း
ကိုယ့်ရဲ့မွေးမိခင်နဲ့တော့ ဘယ်သူမှ မတူနိုင်ပါဘူး။ မိခင်တူတယ်လို့ ပြောတာက သူရဲ့နွေးထွေးမှု၊ မေတ္တာတရား ကို တင်စားလိုက်တာပါ။ အဲဒီလိုသူငယ်ချင်းတွေက သင့်အတွက် ဆိုးတိုင်ပင်၊ ကောင်းတိုင်ပင် တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ သင့်ကို အမြဲကျွေးမွေးပြုစုလေ့ရှိပြီး ဖေးမစောင့်ရှောက်တတ်သူတွေလည်း ဖြစ် ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်အတွက် မဖြစ်မရှိလိုအပ်တဲ့ သူငယ်ချင်းမျိုးပါပဲ။ ရှားလည်း ရှားပါးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခါတလေမှာတော့ သူတို့ဟာ ဆရာကြီးလုပ်တတ်ကြပါတယ်။
အဲဒီလိုသူငယ်ချင်းမျိုးကတော့ သူတို့ရတဲ့ လခတွေကို ရက်ပိုင်းအတွင်း သုံးပစ်တတ်ကြပြီး ပိုက်ဆံမရှိတော့တဲ့ အခါ သင့်ဆီကနေ ပိုက်ဆံချေးဖို့ အပူကပ်တတ်ကြသူတွေပါ။ အသုံးနဲ့အဖြုန်းကို မခွဲခြားတတ်ကြဘဲ ငွေချေး တာကို အကျင့်ပါနေကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုသူငယ်ချင်းမျိုး တစ်ယောက်လောက်တော့ ရှိတတ်မှာပါ။
စကားမစလိုက်နဲ့၊ တစ်နေကုန်တစ်နေခန်း ထိုင်စကားပြောနိုင်တဲ့သူတွေလည်း သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ ရှိတတ်ပါ တယ်။ ဆိုင်တာတွေရော မဆိုင်တာတွေရော၊ စကားရသမျှ သူ့အတွက် ပြောစရာဆိုတာ မကုန်နိုင်ပါဘူး။ စကား ကို ပေါက်ပေါက်ဖောက်သလို ပြောတတ်လွန်းတာကြောင့် သူနဲ့မတွေ့အောင် ရှောင်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေတောင် ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။
သင့်သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ အချစ်အကြောင်း အမြဲတမ်းအကြံပေးနေတဲ့သူတွေ ရှိကိုရှိတတ်ပါတယ်။ Crush အကြောင်းကစလို့ ရည်းစားဟောင်းအဆုံး အကုန်လုံးကို သူကပဲ အကြံပေးတတ်တာပါ။ ဒါပေမဲ့ သူများတွေကို သာ အကြံပေးနေတာပါ၊ သူကိုယ်တိုင်ကတော့ အချစ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ရေရေရာရာ အတွေ့အကြုံမရှိခဲ့ဖူးပါဘူး။
၉။ တစ်ချိန်လုံး selfie ဆွဲနေတတ်သူ
သူငယ်ချင်းအုပ်စုတိုင်းမှာ ဘယ်နေရာရောက်ရောက်၊ ဘယ်အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် selfie ဆွဲတတ်ကြသူတွေ ရှိပါ တယ်။ သင်က selfie ရိုက်လေ့မရှိသူဆိုရင်တောင် သူ့ကျေးဇူးနဲ့ သင့်ပုံလေးတွေ အမှတ်တရရှိလာစေမှာပါ။
၁၀။ စိတ်တူကိုယ်တူ သူငယ်ချင်း
သင်နဲ့ စိတ်တူကိုယ်တူရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းဆိုတာ သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းပါပဲ။ လူတိုင်းမရှိနိုင်ပေမဲ့ ရှိတဲ့သူတွေလည်း ရှိကြပါတယ်။ သင်နဲ့အတူတူ အပြင်ထွက်လည်မယ့်၊ တစ်ယောက်အတွက် လိုအပ်လာရင် တစ်ယောက်က အမြဲအသင့်ရှိနေပေးမယ့် သူငယ်ချင်းမျိုး ရှိနေပြီဆိုရင်တော့ သင်ကံကောင်းတယ်လို့ ဆိုရမှာ ပါ။ သူငယ်ချင်းအများကြီးထက် အဲဒီလိုသူငယ်ချင်းမျိုး တစ်ယောက်လောက်တော့ မဖြစ်မနေရှိထားသင့်ပါတယ်။
သင်တို့ သူငယ်ချင်းတွေမှာ အကြွားသန်သူတွေလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ သူနဲ့မတွေ့လိုက်နဲ့ တွေ့တာနဲ့ အကုန်လုံး ဖမ်းကြွားတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒါကလည်း သူ့ဝါသနာပါ။
၁၂။ ဆိုက်ကိုထည့်တတ်သူ (ဆေးထိုးတတ်သူ)
ကိုယ့်စိတ်ကူးကို ပြောပြမိတာနဲ့ ကိုယ်တွေးတာနဲ့ ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားအောင် ဆေးထိုးတတ်သူတွေပါ။ ကိုယ့်အထင်ကို တစ်မျိုးတစ်ဖုံ ဖြစ်သွားစေတဲ့ အထိ ဆိုက်ကိုထည့်တတ်ကြပါတယ်။ သင်တို့သူငယ်ချင်းတွေထဲ မှာ အဲဒီလို ဆေးထိုးတတ်သူတွေကို ရှိကိုရှိမှာပါ။
မြင်လိုက်တာနဲ့ တစ်ခုမဟုတ် ရှာကြံစနောက်တတ်သူတွေလည်း သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ ရှိတတ်ပါတယ်။ အစအနောက်မခံနိုင်သူက သူတို့အတွက် တကယ့်ပစ်မှတ်ပါပဲ၊ မခံချင်လေ ပိုစလေပါပဲ။ ကိုယ့်သူငယ်ချင်း အချင်းချင်းကို ငိုအောင် စတတ်သူတွေတောင် ရှိတတ်ပါတယ်။
ကဲ… ဒါဆိုရင် သင့်ဆီမှာ သူငယ်ချင်းဘယ်နှစ်မျိုးရှိနေလဲ? သင်ကိုယ်တိုင်ကရော သူများတွေအတွက် ဘယ်လို သူငယ်ချင်းမျိုးလဲ?
ယောက္ခမက သင့်ကိုအမြင်ကြည့်စေမယ့် နည်းလမ်းကောင်း (၃) ချက်…။
Charlie Puth နဲ့ Justin Bieber တို့ကြားက ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဂယက်
Justin စေ့စပ်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာ Justin အတွက်ကော Selena အတွက်ပါ Fans များစွာကြေကွဲခဲ့ရ
LDRS အချစ်ကို LDRS သာနားလည်ပါတယ်
by Phone Khant Kyaw